I-China 1325 disc Ithuluzi le-atc cnc router fektri kanye nabakhiqizi | JCUT
1. Ukusebenza kahle:ama-spindle motors amaningi asebenza ngasikhathi sinye, angaqedela ukucubungulwa kwemikhiqizo ngamanani amakhulu. Uhlelo lokushintsha amathuluzi oluzenzakalelayo oluthuthukisiwe, akukho ukungenelela okwenziwa ngesandla, uhlelo lwenziwa ngokuzenzakalelayo. Usebenzisa itafula le-adsorption yetafula lomhlaba wonke elihamba phambili, lifakwe ngepompo vacuum enamandla e-adsorption, design zone zone, adsorption eqinile yezindawo ezahlukahlukene zezinto zokwakha, ithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi.
Isivinini sokuhambisa ngokushesha: zombili izendlalelo ukujikeleza kwe-rack, isivinini esikhulu, ukusebenza kahle okuphezulu, ijubane elihamba ku-120000MM / MIN.
3. Ijubane lokubaza okusheshayo: ukusetshenziswa kwejubane elikhulu lokushayela i-stepper motor kanye ne-drive, i-Y axis isebenzisa i-drive motor ephindwe kabili, i-high usahihi ye-rack drive, ngesikhuni esinamandla sokusika ukwenza ijubane lokubaza lisheshe.
4. Ukusebenza okubushelelezi: ukungeniswa kwesitimela somugqa ongenisiwe, umugqa ophindwe kabili kanye nemigqa emine yama-block slide ebhola, amandla amakhulu okubamba, ukusebenza kahle, ukunemba okuphezulu, impilo ende, ukunemba okuphezulu okungenisiwe kwebhola, ukusika okuqondile.
5. Intelligent control: ukwamukela uhlelo lokulawula ikhompyutha lwe-ubukhulu ubukhulu bekhadi le-macro (uhlelo lokulawulwa kwesibambo se-DSP off-ozikhethela), nemisebenzi yokuqhekeka, ukucisha, ithuluzi lokusika nokubaza, ngokuqina okuphezulu nokusebenza kahle okukhulu, futhi kulula ukufunda.
6. Ukunemba okuphezulu: i-algorithm yokubikezela esezingeni eliphakeme enamadijithi amathathu ingaqinisekisa ijubane elihamba ngejubane nokunemba, futhi ingahambisana kahle nesoftware eminingi yasekhaya neyangaphandle (njenge: MasterCAM, Type3, UG, AutoCAD, ArtCAM, Proe, JDpaint) nokunye.
7. Iqinile futhi iqinile: Isakhiwo sensimbi sisonke sombhede, insimbi eqinile, amandla amakhulu, ukujikeleza okubushelelezi, ukusebenza ngesivinini esikhulu ngaphandle kokuphazanyiswa, akukho ukunyakaza okunyakazayo.Ukuqinisa itafula, kungaba ukucubungula okuphikisayo kwezinto ezisetafuleni lomsebenzi, iqinile futhi iqinile.
Umkhakha Wokhuni: zonke izinhlobo zeminyango, iWindows, amakhabethe, iminyango yezandla yezandla, iminyango engenacala kopende, izikrini, i-fan craft Windows, ukucubungula kwamacimbi nezinye ifenisha, ukucubungula izinkuni.
Umkhakha wokukhangisa: izimpawu zokukhangisa, ukukhiqizwa kwezimpawu, ukusika impahla, ukukhanda ipulasitiki, ukukhiqizwa kwamalambu e-LED neon neminye imikhiqizo yokuhlobisa izinto zokwenziwa.
Umkhakha wezobuciko nezobuciko: ingaba ngokhuni, bamboo, imabula yokufakelwa, ibhodi e-organic, ibhodi yemibala ephindwe kabili, i-crystal nezinye izinto zokwenzela amaphethini amahle nokuqoshwa kombhalo.
Izinto ezisebenzisekayo: Izinto ezahlukene zokhuni; I-aluminium ipuleti, ipuleti leplastiki ye-aluminium, ipuleti leplastiki; I-PVC, i-acrylic, ibhodi yemibala ephindwe kabili, ibhodi ye-density board, i-crystal board nezinye izinto zokukhangisa; Nemabula ethambile eyakhiwe nezinye izinto zensimbi ezingezona ezensimbi.
Umshini Wokusika Ophezulu we-R7 ATC CNC
Indawo yokusebenza (X * Y * Z) 1300MM * 2500MM * 200MM
Ithuluzi Ithuluzi 12 isikhundla se-servo disk auto thuluzi lokushintsha umagazini ngelenzwa yethuluzi
Imoto IJapan Yaskawa 850w servo motor
Umshayeli IJapan Yaskawa 850w driver we-servo
Ujantshi wesitimela I-X, Y, Z axis isebenzisa ama-25 Hiwin Linear ujantshi, isakhiwo esilenga kamuva
I-eksisi engu-Z I-ek axis TBI -2510 isikulufa sebhola
X, Y izembe I-X, Y axis 1.5m enophephela emhlane
Uhlelo lokulawula Uhlelo lokulawula lweSyntec 6MB
Ukunciphisa kabusha IJapan Shimipo minimer
Itafula lomshini Ithebula le-Vacuum elinezindawo ezi-6, iphampu engu-7.5kw / 380
Umqoqi wothuli 4kw / 380v
Thola umsebenzi Umsebenzi we-angle angle kwesokudla + impahla yokusunduza okuzenzakalelayo
Umzimba womshini Umzimba womshini osindayo ongu-3.5, obeka uphawu lwensimbi yepuleti yensimbi nge-gantry eminyene
Isisindo sengqikithi 2700kg
Esedlule: Umshini we-Atc funiture
Olandelayo: Imishini emibili yokushayela yomugqa we-spindle